प्रथम दोरम्बा शहीद स्मृति फुटबल प्रतियोगिता : सिनिपुले उचाल्यो उपाधि - Sawal Media
रामेछाप – प्रथम दोरम्बा शहीद स्मृति फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सिनिपु गुम्बा मगर सेवा समाज टोकरपुरले उचालेको छ । आज दिउँसो १ बजे भएको खेलमा सिनिपु गुम्बा मगर सेवा समाज टोकरपुरले २ गोल गर्दै र अर्गानिक भिलेज नागीलाई हराएको हो ।
सिनिपुका जर्सी नं.११ का सुरेश खत्रीले खेलको ५५ औँ मिनेटमा गोल गरी जितको लागि खाता खोलेका थिए । सिनिपु कै जर्सी नं. ९ का ओम प्रकाश दनुवारले खेलको ६० औँ मिनेटमा गोल गरे संगै अर्गानिक भिलेज नागीलाई २ गोलको भार परेको थियो । तर जवाफी गोल प्रहार र्ग नसक्दा अर्गानिक भिलेज नागी उपविजेतामा नै सिमित हुन पुग्यो ।
तेस्रो स्थान ओगट्न दिपशिखा ब्वाइज युवा क्लब मन्थली-२ सफल भएको छ । दिपशिखा ब्वाइज क्लबले, लालिगुराँस युवा क्लब लखनपुरलाई ३-० ले पराजित गरेको थियो । दिपशिखाका तर्फबाट २१ आ मिनेटमा जर्सी नं. ९ का सुनिल श्रेष्ठले गाल गरी पहिलो खाता खोलेका थिए । भने जर्सी नं. २३ निकेश कार्कीले खेलको २५ मिनेटमा गोल गरेका थिए भने सोही टिमका जर्सी नं. ५ का जितेन कार्कीले ३४ मिनेटमा अर्को गोल गरेका थिए ।
चैत्र २४ गते देखि २९ गतेसम्म चलेको खेलमा १७ ओट टिमको सहभागिता रहेको थियो ।
खेलमा प्रथम हुने टिमको लागि नगद रु एक लाख ५० हजार शिल्ड, मेडल र प्रमाण पत्र, द्धितिय हुने टिमको लागि नगद रु. १ लाख मेडल र प्रमाण पत्र, तृतिय हुने टिमको लागि नगद रु पचास हजार रुपैयाँ मेडल र प्रमाण पत्र सान्त्वनाको लागि नगद रु २० हजार र उत्कष्ट खेलाडीको लागि नगद रु ५ हजार र ट्रफी सहितको पुरस्कार राखिएको छ ।
तेस्रो विजेताका लागि रियल ग्रिन फ्यासेलिटि म्यानेजमेन्ट एलएलसी साइन भिलेज क्लिनिंग सर्भिस एलएलसीका सविन योन्जनले दुबईबाट प्रायोजन गरेका थिए ।
माधवकुमार नेपाल गुटमा असन्तुष्टि बढ्दै
ट्याक्टर दुर्घटना हुदा ३ जना विद्यार्थीको मृत्यु
संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिमा नेपालकी बन्दना राणा निर्वाचित
प्रथम दोरम्बा सहिद स्मृती कप खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता आजबाट सुरु
संक्रमण बढेपछि दोरम्बा गाउँपालिकाको सबै नाका बन्द 170 views
माधव नेपाल र भीम रावल एमाले पार्टी सदस्यबाट ६ महिना निलम्बित
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बिहीबार भारतको हरिद्वार जादै
कोरोना चीनमा देखिनुभन्दा पहिले अमेरिकामा फैलिसकेको थियो : अमेरिकी वैज्ञानिककै अनुसन्धान